सेक्स टुरिजम र इन्जोय जोनको बहस- यी हुन् पोखराका सेक्स प्वाइन्टहरु ! « Swadesh Nepal
सेक्स टुरिजम र इन्जोय जोनको बहस- यी हुन् पोखराका सेक्स प्वाइन्टहरु !
निगरानी नम्बर १ , जेठ ९ गते, बिहीबार, बिहान ९ बजे- न्यू रेस्टुरेन्ट, नागढुंगा
निगरानी नम्बर २ , जेठ ९ गते, बिहीबार, बिहान १० बजे- निर्भाना रेस्टुरेन्ट, नागढुंगा
निगरानी नम्बर ३, जेठ १० गते, शुक्रबार -ए वान रेस्टुरेन्ट, शान्तिनगर
निगरानी नं. ४ , जेठ १० गते, शुक्रबार
सम्पर्क व्यक्तिमार्फत भेटिन्छन् यौनकर्मी- यौनधन्दा हुने केही सेक्स प्वाइन्टको निगरानीपछि हामीले सम्पर्क व्यक्तिमार्फत यौनकर्मी भेट्नका लागि बिहीबार राति ११ बजेसम्म पोखराका विभिन्न चोक र गल्ली चहार्‍यौँ। ट्याक्सी चालकमार्फत यौनकर्मी भेट्न खोज्दा निकै समय लाग्यो। सुरुमा ट्याक्सी चालक आफूलाई यो विषयमा केही थाहा नभएको भन्दै पन्छिन्थे। एक जना ट्याक्सी चालकले ‘मेरो नाम लिनू’ भनेर एक जना महिलाको नम्बर दिए। फलानो दाइले नम्बर दिनुभएको भन्नेबित्तिकै ती महिलाले फोनमा भनिन्, ‘ए ल ल कुरा बुझेँ, एक घण्टापछि फोन गर्छु।’ तर, उनले फोन नगरेपछि हामीले पुनः ती महिलालाई फोन गर्‍यौँ। उनीहरूले केटीहरू व्यस्त भएकाले समय लाग्ने बताइन्।
बाग्लुङ बसपार्कको यौनधन्दा बन्द- कुनै समय पोखराको बाग्लुङ बसपार्क रेड लाइट एरियाभन्दा कम थिएन। बसपार्क आसपास खुलेका दर्जनौँ होटलका ढोकामा अर्धनग्न युवती ग्राहकको प्रतीक्षा गरिरहेका हुन्थे। २०७१ सालमा वसन्त लामा कास्की जिल्लामा प्रहरी प्रमुख थिए। स्थानीयको सहयोगमा उनले नै कडाइ गरेपछि बाग्लुङ बसपार्कको यौनधन्दा बन्द भएको थियो। बसपार्कवरिपरि रहेका ७५ वटा होटलमा यौनधन्दा हुने गरेको थियो। पोखराको मुख्य यौनधन्दा हुने अखडा बन्द भए पनि शहरका विभिन्न चोकमा रहेका रेस्टुरेन्टमा अहिले निर्बाध रूपमा यौनधन्दा हुने गरेको ‘सम्पूर्ण’को निगरानीमा देखियो।
पोखराको आपत्ति, केशवशरण लामिछाने-पोखरा
साभार – अन्नपूर्ण सम्पूर्णविक्लीबाट